Strawberries | January 2020
Strawberries Qalabka iyo daryeelka saxda ah
Diyaarinta ciidda beeritaanka strawberries Strawberries sii kordhaya hal meel dhowr sano oo isku xigta. Diyaarinta ciidda waxay u baahan tahay fiiro gaar ah, sababtoo ah dhalidda berry waxay ku xiran tahay diyaarinta saxda ah. Marka hore waxaad u baahan tahay inaad doorato goob. Waa in ay ahaataa meel bannaan, oo leh iftiin qorrax leh. Indeed, sababtoo ah la'aanta qorax ku filan, waxaa jiri doona goosashada xun ee strawberries.
The ugu strawberry noocyo ugu delicious
Strawberry wanaagsan! Iyadoo lagu raaxeysto, qof kastaa wuu cunaa, carruurta iyo dadka waaweyn. Astaanta noocan oo kale ah, nooca nooca macaan, mararka qaarkood leh dookh yar, marka laga reebo dhadhanka soo jiidashada, sidoo kale waa mid aad u faa'iido leh - waxay ku jiraan badan oo fiitamiin iyo macdan, birta, potassium, copper, magnesium, manganese. Lemon wuxuu ka hooseeyaa nuxurka vitamin C.
Cudurka strawberry "Gigantella"
Beeralayda xirfadlayaasha ah sanad walba waxay ku dadaalaan inay kala qaybiyaan dhirta, taas oo "ku nool" on sirqoolladooda. Sidaa darteed, dadkan ayaa si joogto ah u raadinaya noocyo cusub oo dalagyo kala duwan oo awood u leh in ay siiyaan beergooys aad u wanaagsan, iyo sidoo kale, miraha aad u fiican. Sida for strawberries, wakiilka ugu mudan ee berry this waa noocyo kala duwan "Gigantella".
Strawberry waa mid ka mid ah cuntooyinka ugu jecel carruurta iyo dadka waaweyn. Cimilada caleemaha guduudan waxay calaamad u tahay bilowga xagaaga, fasaxyada iyo fasaxyada. In kasta oo xaqiiqda ah in dukaamada qaar ka mid ah badeecadda this la iibsan karaa wakhti kasta oo sanadka, dadka badankoodu waxay fahmaan in tani ma aha strawberry, laakiin natiijada ah ee warshadaha kiimikada.
Kala duwan ee strawberries "Albion"
Way adag tahay in maanta la helo qof aan isku dayaynin strawberries ee noloshiisa. Magaca labaad ee raaxada this waa strawberries beerta. Wax kasta oo ay adag tahay in la kobciyo tan ama nooca berrito ah, dadka sanad kasta midkoodba waa ku tallaalidda duurka, ama ay ka baxaan ubaxyo cusub. Kuwa ugu caansan waa kuwa kala duwan, berry ah oo gaaraya qiyaaso waaweyn oo dhadhan fiican leh.
Sida loo abuuro strawberries sida ku daboolan alaabta
Qodobkani, waxaan tixgelin doonaa beeritaanka strawberries hoosta maaddada, u tilmaam dhinaca dhinacyada wanaagsan iyo xun ee qaabkan, kuu sheegi sida loo sameeyo iyo inta ay ku kacayso. Waxaan baraneynaa sida loo kordhiyo wax soosaarka marka la isticmaalayo alaabta daboolka. Ma taqaanaa? Strawberry waa magaca caanka ah ee dhirta iyo strawberries cagaaran.
Strawberry Berry oo ay jecel yihiin dad badan. Waxaa jira noocyo badan oo dhirta, mid kastoo uu leeyahay sifooyinkiisa: dhadhamin, muuqaal, dhalid. Difaacyada strawberry Elizabeth 2 ayaa door bidey by bannaanka u badan, iyo tani waxay u sabab u ah tayadiisa. Ma taqaanaa? Bannaanka iyo bannaanka u qarsoon noocyo badan oo kala ah Elizabeth 2 sababtoo ah xaqiiqda ah in berry ay si fiican u qaadeen iyo kaydiyaa.
Noocyada ugu caansan ee strawberry qalalan iyo strawberry
Strawberries waa berrito faa'iido leh oo macaan, kaas oo sidaas jecel carruurta iyo dadka waaweyn. Si ay ugu raaxeeysato dhadhanka, ma ahan daruuri lagama maarmaan u ah in lagu daboolo kaymaha si ay u raadiyaan muraayado qarsoon, sababtoo ah strawberries waa la kobcin karaa guriga. Nooca ugu caansan ee strawberry waa bezusaya remontant, noocyada ugu wanaagsan ee kuwaas oo leh noocyo kala duwan oo sifooyin wanaagsan.
Sida loola tacaalo cayayaanka strawberry
Haddii aad u maleyneyso in walxaha nool oo kaliya ay u baahan yihiin in la ilaaliyo, markaa ma aha. Dhammaanteen waan jeclahay berrigan - strawberries, laakiin si ay u gaarto miiskeenna ammaan iyo codka, waxaad u baahan tahay inaad ilaaliso strawberries cayayaanka. Taasna waxaan ku caawin doonaa inaad ka garato. Sida loo xaliyo cayayaanka strawberry Mid ka mid ah cayayaanka ugu khatarsan ee strawberries waa caarada strawberry.
Daryeelka saxda ah ee strawberries ka dib goosashada
Beeraley kasta oo doonaya in uu helo strawberries dhadhan fiican leh, weyn oo casiir leh xilli ciyaareedkan. Oo waxaa la joogaa wakhtigii si aad u daryeesho goosashada mustaqbalka isla markiiba ka dib goosashada. Daaweynta berry-karku waa geedi socod dheer, oo ku dhowaad dhammaan xilli-ciyaareed, laakiin waxay dareemeen daryeel ninkii beerta ka shaqaynayay, strawberries ma dhicin isaga oo leh miro deeqsi ah.
Sida loo daryeelo strawberries inta lagu jiro ubax, talooyinka ugu fiican
Qof kastaa wuu ogyahay casaan, casaan, casiir leh oo la yidhaahdo strawberries. Si aad u hesho goosashada wanaagsan ee buuxda, waxay u baahan tahay inay bixiso daryeel tayo sare leh maaha oo keliya inta lagu jiro xilli firfircoon, laakiin sidoo kale inta lagu jiro ubax. Daryeelka Strawberry waa waraabinta saxda ah, quudinta, cawska nadiifinta, shaarbarka xad-dhaafka ah iyo tilling ciidda agagaarka duurka.
Way adag tahay in la helo qof aan jeclaan laheyn casiir ah, midho dhalaalaya oo macaan leh - strawberries. Waxay kobciyaan mucjisadan goobaha kala duwan ee cimilada ah, xayawaanka kala duwan, iyagoo isticmaalaya farsamooyin kala duwan oo kala duwan. Si kastaba ha ahaatee, yar yihiin ogaadaan waxa ay tahay bacriminta for strawberries, sameeyey guga.
Qof kasta oo leh dhulkiisa ayaa inta badan wuxuu tixgeliyaa go'aanka saxda ah ee lagu beerayo strawberries. Beerta cas cas ee casriga ah ayaa si siman u jecla carruurta iyo dadka waaweyn, iyo "cabbirka Ruushka" waxaa loo tixgeliyaa inuu yahay noocyada kala duwan ee strawberry jecel ee beeralayda warshadleyda gudaha, isagoo ah isugeyn ballaaran oo strawberry ah.
Strawberry "Masha": dabeecadaha kala duwan iyo beerista agrotechnology
Strawberries waxay u badan tahay mid ka mid ah midhaha ugu jecel iyo jecel ee bannaanka. Dad badan ayaa jeclaan lahaa in ay helaan noocyo kala duwan leh sifooyinka ugu sareeya goobta ay ku yaalliin: caleemaha waaweyn, caabbinta sare ee cudurada, daryeelka aan qabin iyo wax-soo-saarka fiican. On mid ka mid ah noocyada this waxaan ku hadli doonaa maqaalkan.
Noocyo ugu wanaagsan ee strawberries waaweyn
Strawberries ama strawberries beerta waa kuwo udgoon oo casiir leh, macaan oo jeclaada by qof kasta oo da 'yar ilaa da'. Way adagtahay in la la kulmo qof aan jeclaan laheyn cayayaanka shimbiraha ee qaab cusub ama macmacaan, iyo kuwa ku beerta dalagga aaggooda, waxay doonayaan in ay had iyo jeer noqdaan kuwo waaweyn iyo kuwo badan. "Gigantella" Iskudhufnaanta noocyada kala duwan ee xilliga kulaylaha, taas oo ka muuqata dadaallada loogu talagalay dadka reer Holland.
Noocaha cayayaanka "Lord": habboonaanta saxda ah iyo sifooyinka daryeelka
Bannaanka u badan yihiin kuma faraxsan yihiin kala duwan ee dalagyada beerta. Si kastaba ha noqotee, inta badan naftooda waa inay eedeeyaan iyaga oo aan helin natiijada laga filayo, sababtoo ah waxay si xun u daryeeli karaan strawberries. Laakiin noocyada kala duwan waxay u baahan yihiin hab gaar ah iyo xaaladaha qaarkood ee xabsiga. Iyo strawberry "Lord" ma aha mid ka reeban xeerarkaas.
Strawberry "Marshal" waa mid ka mid ah noocyada leh miraha waaweyn. Bannaanka u badani waxay door bidaan noocyada noocyada kala duwan ee loogu talagalay taranta, maaddaama ay suuragal tahay in la soo ururiyo wax badan oo ka badan hal diga ah intii ay ku ciyaari lahaayeen miro yar yar on geedo dhowr ah. Sheekada xulashada noocyada strawberries noocyo ah "Marshal" kala duwan "Marshal" - natiijada hawsha Nederlandka Marshall Yuell.
Strawberry waa mid sax ah oo ka mid ah berry ugu jecel yahay. Waxay leedahay faa'iidooyin badan: casiir leh, dhadhan fiican leh, udgoon leh, hodan ku ah fitamiinada, micro iyo macro macruufka. Strawberries waxay taageertaa difaaca jirka (gaar ahaan carruurta iyo dadka waayeelka ah). Qadar yar oo kalooriyeyaashu waxay ka dhigeysaa midhahaas soo jiidashada cuntada.
Sida loo quudiyo strawberries dayrta
Strawberries, ama strawberries - berrito oo casiir leh oo berry udgoon leh - oo ay jecel yihiin carruurta iyo dadka waaweyn. Imaanshaha xagaaga ayaa la rajeynayaa, gaar ahaan, sababtoo ah faa iido badan oo la daalacan yahay. Marka lagu daro dhadhanka aadka u fiican, strawberry waxay sidoo kale keentaa faa'iidooyin badan jirka jidhkiisa - waa ilaha guud ee fitamiinada, walxaha raadraaca iyo fiber.
Kala duwan ee Strawberry "Asia" kuma jiro mid la mid ah gobolka ugu weyn adduunka. Talyaaniga waxaa laga saaray 2005tii. Kala duwanaanta ayaa si fiican u koray beerahayaga, beeralayana way jecel yihiin. Strawberry "Asia" labadaba faa'iido iyo faa'iidooyin, iyo qodobkan waxaad ka heli doontaa sharaxaad ka duwan kala duwan, iyo sidoo kale agrotechnology ee beerashada iyo aasaaska u ah daryeelka.